iPhone အတွက်နည်းပြသင်ခန်းစာများ အိုင်ဖုန်းသတင်းများ (စာမျက်နှာ ၆)
iPad ပေါ်တွင် iCloud နှင့် AppleID
ICloud နှင့် AppleID အကောင့်များသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ သင့် iPad ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်နှစ်ခုလုံးမှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းမှုသည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ဂူးဂဲလ်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်လဲလှယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်။ သို့သော် CalDAV နှင့် CardDAV မှတစ်ဆင့်၎င်းနှင့်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်များကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iOS6တွင်ပိတ်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုမည်သို့တွန်းအားပေးရမည်နည်း
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအားအေးခဲစေခြင်းသည် iOS တွင်မရှိသလောက်ဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်မည်သည့် application ကိုမဆိုပိတ်နိုင်သည်
မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ iMessage အဟောင်းသည် Apple ထုတ်ကုန်များအကြားမှန်ကန်စွာ configure လုပ်ထားလျှင်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသော instant messaging service ဖြစ်သည်။
အိမ်တွင်မျှဝြေခင်း - သင်၏အိုင်ပက်ပေါ်ရှိ iTunes စာကြည့်တိုက်
iTunes Home Sharing option ကသင့်အားအိုင်ပက်တစ်ခုမှကွန်ယက်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိနေစဉ် iTunes အကြောင်းအရာအားလုံးကိုခံစားနိုင်ခွင့်ပေးသည်
iOS6မှ WI-FI နှင့်ပြနာများရှိသလား။ ဒီဖြေရှင်းချက်များကိုစမ်းကြည့်ပါ
iOS6ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch အသုံးပြုသူများကြုံတွေ့ရသော WIFI ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်သင်ခန်းစာ
iPad အတွက် YouTube ဖွင့်ရန်စာရင်းများဖန်တီးပါ
၎င်းသည်ဖွင့်စရာစာရင်းများဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်အတွက်ဇာတိ YouTube အက်ပလီကေးရှင်းမှရှိပြီးသားများသို့ဗွီဒီယိုများမည်သို့ထည့်ရမည်ကိုပြသည်။
သင့်ရဲ့ iPad အပေါ်ကန့်သတ်မှုကိုသက်ဝင်စေပါ
Plex သည်သင်၏ iPad တွင်မည်သည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကိုမဆိုဖွင့်သည်
Plex ကသင်၏ iPad တွင်သင်၏ကွန်ယက်အတွင်း၊ ပြင်ပ၌ပင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည့်သင်၏ကွန်ပျူတာ၌သိမ်းဆည်းထားသောမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆိုကစားရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ရုပ်ရှင်များကို Handbrake ဖြင့် iTunes သို့အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်
ရုပ်ရှင်များကို iTunes သဟဇာတဖြစ်သောပုံစံများသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် Handbrake ကြောင့်အလွန်လွယ်ကူပြီး၎င်းမှာလည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။
iTunes 11 ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ iPad နှင့်အသုံးပြုရန်သင်ခန်းစာ (အပိုင်း ၄)
iTunes 11 ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ပက်သို့မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း၏သင်ခန်းစာ
သင်၏ကိရိယာနှင့် iTunes 11 အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်။ သင်၏အိုင်ပက်ဒ်ကိုအများဆုံးရယူရန် iTunes ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုရှင်းပြထားသည်။
iPhone5ရှိ Wi-Fi ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း
iOS6နှင့် 6.0.1 jailbreaking သောအခါ "ဒီတည်ဆောက်မှုအတွက်ပျောက်နေတဲ့ keys.plist data" အမှားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
iOS6နှင့် 6.0.1 jailbreaking သောအခါ "ဒီတည်ဆောက်မှုအတွက်ပျောက်နေတဲ့ keys.plist data" ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ
PassHack: App များကို PassBook မှဝှက်ထား (jailbreak မရှိပါ)
အက်ပလီကေးရှင်းများကို jailbreak မကျသည့် iPhone များပေါ်တွင်ဖျောက်ထားပါ
သင်ခန်းစာ - baseband ကို upload မလုပ်ပဲ iPhone4or 3GS ကို iOS6ကို update လုပ်ပါ
သင်ခန်းစာ - သင့် iPhone ကို iOS 5.x မှ iOS 5.x သို့မည်သို့ပြန်လည်ထားမည်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူသင်လိုချင်တဲ့ iOS 5.x ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင် A5 device ကို iOS 5.x ဖြင့် restore လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - IMEI က iPhone ကိုသော့ဖွင့်ပြီးနောက်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များ
သင်ခန်းစာ - IMEI က iPhone ကိုဘယ်လိုသော့ဖွင့်ရမလဲ၊ jailbreak
သင်ခန်းစာ - iOS6မှ iOS 5.1.1 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့သူအဖြစ်အသုံးပြုရန် iMessages ကို iPhone နှင့် Mac တွင်မည်သို့ထားရမည်
သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့သူအဖြစ်အသုံးပြုရန် iMessages ကို iPhone နှင့် Mac တွင်ထားပါ
Tutorial: iOS6တွင် Cydia ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
သင့် iPhone ၏ UDID ပေါက်ကြားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနည်း
သင်ခန်းစာ - 640 × 1136 resolution နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် iOS Simulator ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ
Xcode တွင်ထည့်သွင်းထားသော iOS Simulator ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်သင်ခန်းစာ iPhone 640 အသစ်တွင်ရရှိနိုင်သော 1136x5 resolution နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်
06.15.00 မှ baseband 05.13.04 ကနေ Downgrade
သင်ခန်းစာ - iOS6ကိုမည်သို့ install ရမည်နည်း
iOS 6.0 ဖြင့်ဖိုင်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်မည်သို့ပူးတွဲရမည်နည်း
iOS 6.0 ဖြင့်ဖိုင်များကို e-mail ဖြင့်မည်သို့ချိတ်ရမည်နည်း
Tutorial: Redsn5.1.1w (Cydia) ကို အသုံးပြု၍ iOS0untethered jailbreak
Jailbreak ကို untethered iOS 5.1.1 ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ
tutorial: iOS 5.1.1 jailbreak untethered
သင်ခန်းစာ - iPhone 5.0.1S ပေါ်ရှိ iOS4သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Olloclip ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - iPhone4နှင့် 4S အတွက် Fisheye၊ macro နှင့်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်
Tutorial: SAM ကိုသုံးပြီးဘယ် iPhone မဆို unlock လုပ်နည်း
သင်၏ iPhone မျက်နှာပြင်ကို AirServer ဖြင့်အသုံးပြုပါ
Air TV မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Apple TV သည် iOS ထုတ်ကုန်များ၏ဖန်သားပြင်ကို TV monitor ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Apple က iPhone4နှင့် 4S အတွက် Led ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာ
Backlit iPhone4နှင့် 4S အတွက် Apple ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းသင်ခန်းစာ
သင့် iPhone အတွက်အရည်အသွေးမြင့်လက်လုပ်သားရေကိုယ်ထည် Piel Frama
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Piel Frama သားရေအဖုံးများ၊ Ubrique တွင်ပြုလုပ်ထားသောလက်မှုပညာများဖြစ်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောလက်မှုပညာရှင်များနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအား Bluelounge မှသုံးသပ်ခြင်း - iPhone အတွက်ကေဘယ်ကြိုးများမပါသောနံရံအားသွင်းစက်
iPad အသစ်ရှိ WI-FI ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်း
အကယ်လို့သင်ဟာ iPad အသစ်ပေါ်ရှိ WI-FI အချက်ပြမှုပြwithနာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သုံးစွဲသူတ ဦး ဖြစ်လျှင်၊
iPad အသစ်၊ WI-FI ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ၄ င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်းနှင့်ပြproblemsနာများ
iPad အသစ်သည် WI-FI ဆက်သွယ်မှုပြandနာများနှင့်လက်ခံမှုအားနည်းခြင်းများရှိသည်။ ဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးပါတယ်။
ဖြေရှင်းချက် - ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို OTA မှတဆင့်မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိပါ
သင်ခန်းစာ - jailbreak သည် iPad 5.1 အတွက် Redsn0w နှင့်အတူ Mac iWindows 1 သို့ tethered (Mac နှင့် windows)
သင်ခန်းစာ - baseband ကိုမတင်ပဲ iOS 5.1 ကို update လုပ်ခြင်း။
tutorial: jailbreak ကို iOS 5.1 တွင် Redsn0w (Mac နှင့် windows) ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
အဆက်အသွယ်များကို iMessage ကိုအသုံးပြုပြီးရှာပါ
သင်၏အဆက်အသွယ်များထဲမှမည်သည့် iMessage ကို iOS စက်သို့မဟုတ် Mac တွင်သုံးသည်ကိုသိရန်လှည့်စားပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်စာတိုများကိုအခမဲ့ပို့နိုင်သည်။
သင်၏ iOS device ကို jailbreaking ပြီးနောက်၊ springboard ပေါ်တွင်အဖြူရောင်အိုင်ကွန်များပေါ်လာနိုင်သည်။ ဖြေရှင်းနည်းကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
Cydia application တစ်ခုဘာကို install လုပ်တာလဲ။ ဘယ်မှာထည့်သလဲ။
တေးဂီတအားလုံးကို iPhone, iPod Touch နှင့် iPad မှမည်သို့ချက်ချင်းဖျက်ပစ်နိုင်သည်
မှတ်ဥာဏ်ကိုလျော့ကျစေပြီးအပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ရန်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိဂီတအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်။
သတိပေးချက် - သင်၏ jailbreak ကိုအမြဲတမ်းထိန်းထားရန်သင်၏ SHSH နှင့်အတူစိတ်ကြိုက် firmware 5.0.1 ကိုဖန်တီးပါ
သင်မသိနိုင်သော iPhone ကင်မရာ၏လှည့်ကွက်
iOS5ကိုထည့်သွင်းထားသော iPhone ကင်မရာအက်ပ်တွင်တွေ့ရသောလျှို့ဝှက်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်မည်နည်း။
tutorial: iOS2နှင့်အတူ jailbreak iPad 5.0.1
ဒီလမ်းညွှန်အားဖြင့် iPad2ကို iOS 5.0.1 ဖြင့် jailbreak လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Absinthe ကိုဒီမှာ download လုပ်ပါ။ အရေးကြီးသည်…
သင်ခန်းစာ - jailbreak iPhone 4S iOS5နှင့် iOS 5.0.1
tutorial jailbreak iphone 4S ios5ios 5.0.1,
သင်ခန်းစာ - သင်၏ SHSH များနှင့် firmware ကိုတည်ဆောက်ပြီး iOS 5.0.1 untethered jailbreak ကိုအမြဲတမ်းလုံခြုံအောင်ထားပါ
သင်ခန်းစာ - Siri ကို iPhone4မှာတပ်ဆင်ပုံ (နှင့်အစောပိုင်းထုတ်ကုန်များ)
iPhone4တွင် Siri ထည့်သွင်းနည်း
iTunes သို့မဟုတ် iPhone မှ Promo Code ကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း
ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်များနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကုဒ်များသည်ထိုအကြောင်းကြောင့် iTunes တွင်တွေ့ရပြီးသင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုမှုကြောင့် ...
သင်ခန်းစာ - iOS 5.0.1 ကို Untethered Jailbreak Forever ကိုလုံခြုံစွာထားပါ။
ဒီသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသင် untethered iOS 5.0.1 jailbreak ကိုသေချာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - iOS5တွင် gestures ဖြင့် Home button ကိုနှိပ်ပါ (jailbreak မပါဘဲ)
jailbreak မလိုဘဲ custom keyboard shortcut များမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုမကြာသေးမီကငါတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ၊
သင်ခန်းစာ - jailbreak သည် iOS 5.0.1 သို့ PwnageTool (MAC) (Custom Firmware) နှင့် untethered
သင်၏လက်ရှိ baseband ကိုထိန်းထားရန်နှင့်သင်၏ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင်စိတ်ကြိုက် firmware တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက PwnageTool သည်သင်ရှာဖွေနေသည်။
Tutorial: jailbreak ကို iOS 5.0.1 သို့ Redsn0w (Mac နှင့် windows) ဖြင့် untethered
ဒီသင်ခန်းစာမှာ Redsn5.0.1w 0b0.9.10 ကိုသုံးပြီး UNTETHERED to iOS 1 ကို jailbreak လုပ်နည်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ သင်လိုအပ်သည် - iOS ရှိပါသလား။
Tutorial: jailbreak မပါပဲသင့် iPhone မှာ custom keyboard shortcuts ပြုလုပ်ပါ
iOS5က iPhone အသစ်တွေအတွက်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေအများကြီးယူလာပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အများစုကသင့်ကိုသတိမထားမိကြဘူး။ နှင့်အတူ ...
သင်ခန်းစာ - iMAME emulator တွင် roms များကို jailbreak မလုပ်ပါနဲ့
Wii အဝေးမှ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် iMAME4All emulator ကိုခံစားရန်သင်ခန်းစာအများစုကိုသင်မှတ်မိလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ - baseband ကိုမတင်ပဲ iOS 5.0.1 ကို update လုပ်ခြင်း။
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ Gevey SIM ကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက် baseband ကို upload မလုပ်ပဲ iOS 5.0.1 ကို iPhone ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်မှာပါ။
လောလောဆယ် App Store တွင်လမ်းညွှန်စနစ်များ (GPS) များစွာရှိနေသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။
အသေးစားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး - သင်၏နားကြပ်ကိုလှိမ့်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောလက်ကိုင်အဖုံးများ
အသေးစားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသည် Etsy တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် iPhone Case များ၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လှည့်ကွက်: iOS5တွင်ပါရှိသော Emoji keyboard ကိုသက်ဝင်စေပါ
ဒီနေ့ iOS5ရဲ့နည်းနည်းလေးကိုမင်းတို့တော်တော်များများသတိမထားမိတဲ့နည်းကိုပြတော့မယ်။
သင်ခန်းစာ - FaceTime ကို 3G ကွန်ယက်များတွင်ဖွင့်ပါ
iOS3ရှိ 5G ကွန်ယက်များတွင် FaceTime ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် function ကိုသင် activate လုပ်နိုင်သည်။
Jailbreak မပါဘဲနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သော iPhone အင်္ဂါရပ်များကို IconSettings
မနေ့ကသင့်အား iPhone ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားမည်သို့လျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ပုံကိုပြောပြခဲ့သည်။
DVD ဗွီဒီယိုများကို iPad သို့လွှဲပြောင်းခြင်း (သင်ခန်းစာ)
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းတွင်သင်၏ DVD ရုပ်ရှင်စုဆောင်းမှုကိုနှစ်သက်လိုပါကဤနေရာတွင်ရိုးရှင်းပါသည်။
Icon Project မှတစ်ဆင့်သင်၏ iPhone ကို Jailbreak မလိုဘဲလုပ်ဆောင်ပါ
SBSetting သည်သုံးစွဲသူများစွာ Jailbreak သူတို့၏ iPhone ကိုအသုံးပြုသော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - jailbroken မဟုတ်သော iPhone များပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုဖွင့်ပါ
မနေ့ကစက်တင်ဘာမှာ iOS5ဟာ iPhone ကင်မရာအက်ပလီကေးရှင်းမှာတိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးရန် function တစ်ခုကိုဖျောက်ထားတယ်။
Tutorial: iOS5+ Jailbreak တွင် iBooks ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်
firmware အသစ်နှင့်အမြဲတမ်းမဟုတ်သော jailbreak ပေါ်လာသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခုကဲ့သို့သော iBooks application သည်များသောအားဖြင့် ...
သင်ခန်းစာ - jailbreak ကို Redsn5w နှင့် iOS0သို့ချိတ်ဆက်ထားသည် (နောက်ဆုံးထွက် Mac နှင့် windows)
ဒီသင်ခန်းစာမှာ TETHERED to iOS5ကိုဘယ်လို jailbreak လုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပါမယ်။
သင်ခန်းစာ - iOS5မှ iOS 4.3.3 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
သငျသညျဗားရှင်း 5.0 သို့အဆင့်မြှင့်နှင့် untethered jailbreak ၏ထွက်ပြေးပြီလော သင်၏အသုံးချပရိုဂရမ်များအလုပ်မလုပ်ဘူးလား ...
သင်ခန်းစာ - baseband ကို upload မလုပ်ပဲ iPhone ကို iOS5သို့ update လုပ်ပါ
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ Gevey SIM ကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက် baseband ကို upload မလုပ်ပဲ iOS5ကို iPhone ကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်မှာပါ။
သင်ခန်းစာ - Cydia tweaks များကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ချိန်ညှိချက်များ iPad Settings (iOS5jailbreak) တွင်ပေါ်လာမည်။
သင့်စက်မှာ jailbreak ပါ ၀ င်တဲ့ iOS5ရှိသူများကတော့ tweaks setting များကြောင့်…
သင်ခန်းစာ - iOS 1 တွင် jailbreak နှင့်အတူပြtheနာကို 4/5 သို့လျှော့ချခဲ့သည်
SBSettings သည် iOS5GM နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းအချို့သောသူများနှင့်သဟဇာတမရှိကြသေးသောသူများရှိသည်။
Swift Voice သည်အီးမေးလ်မှတဆင့်အသံမှတ်စုများပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေသည်
CodeGoo သည် Swift Voice ကိုတီထွင်သူဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသံမှတ်စုတစ်ခုအားမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်မှပေးပို့နိုင်သည်။
သင်ခန်းစာ - မည်သည့်ဂီတ application တွင်မဆို AirPlay လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသက်ဝင်စေသည်
သင်အချို့သည်တေးဂီတကိုဖွင့်ရန်အပလီကေးရှင်းကိုသုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည် AirPlay နှင့်မကိုက်ညီကြောင်း ...
Jailbreak မပါပဲ iPhone ကို Arduino နဲ့ချိတ်ဆက်ရန်လမ်းညွှန်။
သင်၏ iPhone တွင် Apple က၎င်း၏စတိုးဆိုင်များတွင်အသုံးပြုသောဗီဒီယိုသရုပ်ပြကိုကြည့်ပါ
အကယ်၍ သင် App Store သို့ ၀ င်ခဲ့လျှင်သင်ပြသထားသောထုတ်ကုန်အတော်များများသည် ...
[သင်ခန်းစာ] iPhone မှမည်သည့် website တွင်မဆို HTML source code ကိုကြည့်ပါ
သင်၏ဝါသနာသို့မဟုတ်အလုပ်ကြောင့်သင် web page များ၏ source code ကိုကိုင်တွယ်ရပေမည်။ အမှန်တရားမှာ ...
[သင်ခန်းစာ] iMAME4all, သင့် iPhone ပေါ်ရှိအင်ဂျင်ခန်းများ၏ဂန္ထဝင်
ငါ့ကို nostalgic လို့ခေါ်ပါ၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုအားသင်နှင့်မျှဝေနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။
[သင်ခန်းစာ] iMAME4all, သင့် iPad ပေါ်ရှိအင်ဂျင်ခန်းများ၏ဂန္ထဝင်
Cydia အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော applications များ
သင်အများစုသည် jailbreak လောကအတွက်အသစ်ဖြစ်နေပုံရပြီးမည်သည့်အတွက်တပ်ဆင်ရမည်၊
Backup အဟောင်းများကိုဖျက်ပြီး disk space ကိုပြန်လည်ရယူပါ
အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်၊ iDunes မှာ iTunes မှပြုလုပ်သောမိတ္တူပွားများသည် disk နေရာတော်တော်များများသုံးပြီး၊
tutorial: iOS5မှ iOS 4.3.3 သို့အဆင့်လျှော့ချခြင်း (iPad 1 နှင့် iPad 2)
iOS5ကို iOS2မှာ iPads နဲ့ iPads XNUMX မှာ install လုပ်ထားပြီးပြီဆိုလျှင်သင်အရင်ကမရှိသေးဘူးဆိုရင် ...
မှတ်ချက်။ ခေတ်မမှီတော့သည့်လမ်းညွှန် -> ဒီချိတ်ဆက်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
iOS5ကို update လုပ်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အရာအားလုံးရရှိရန်သင်၏ device ကို developer အဖြစ်မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း (UPDATED)
iOS5ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်မလဲဆိုတဲ့ twitter မှာအီးမေးလ်တွေ၊ မေးခွန်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ရရှိနေပါတယ်။
PhoneItiPad - iPad 1 3g ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး SMS ပို့နိုင်သည့် application
ပြီးခဲ့သည့်မေလကကျွန်ုပ်တို့၏ 3GG ဆက်သွယ်မှုကိုအပြည့်အဝအသုံးချသောဤ tweak အကြောင်းကြားခဲ့ရသည်။
သင်ခန်းစာ - အကယ်၍ သင်သည် developer မဟုတ်လျှင် iOS5ကိုအသုံးပြုခြင်းမှမည်သို့ဖြတ်ရမည်နည်း
iOS5link များ၏အောင်မြင်မှုကြောင့် developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ iOS5ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ ကျနော်တို့ဆန့်ကျင်အကြံပေးချင်တယ် ...
သင်ခန်းစာ - iCloud ဖြင့်အလိုအလျောက်အက်ပ်စည်းညှိခြင်းကိုဖွင့်ပါ
iCloud ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ applications များ၏အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းကိုစတင်အသုံးပြုလိုပါကအောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
သင်ခန်းစာ - SHSHs ဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ (Update 4/06/11)
အဘယ်ကြောင့် SHSH ပေါ်လာသနည်း Apple က jailbreak ကိုငြီးငွေ့နေပြီး iPhone 3GS (bootrom အသစ်) အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီး ...
tutorial: သင်၏ SHSH ကို iFaith နှင့်ထုတ်ယူပါ
သင် install လုပ်ထားသည့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယခုတိုင်အောင်သင်သည် SHSH ၏နောက်ဆုံး iOS ကိုသာသိမ်းနိုင်သည်။ ဒါ…
သင်ခန်းစာ - Mobile Safari ရဲ့သမိုင်းကိုရှင်းလင်းပုံ
အကယ်၍ သင်ဟာသင့်ရဲ့ iPhone ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ရှာဖွေပြီးတဲ့သူတွေကိုမသိစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။
tutorial: Redsn4.3.3w ကိုသုံးပြီး iOS0ကို jailbreak ဘယ်လိုလုပ်ရမည်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ Windows နှင့် Mac မှ iOS 4.3.3 ကို untethered jailbreak လုပ်နိုင်တယ်။ iPhone 4, iPhone 3GS, …
သင့် iPhone အတွက်အခင်းအကျင်းများ
သင့် iPhone ၏ဖန်သားပြင်အတွက်မြင့်မားသော resolution ရှိသည့်အကြောင်းအရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်သင်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်သာသွင်းရမည်။
tutorial: Redsn4.3.1w ကိုသုံးပြီး iOS0ကို jailbreak ဘယ်လိုလုပ်ရမည်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ Windows နဲ့ Mac မှ iOS 4.3.1 သို့ untethered jailbreak လုပ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည် iPhone 4, iPhone ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Facetime ကိုမင်းရဲ့ iPhone နဲ့ iPad မှာအီးမေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ဤသင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်သည် FaceTime ကိရိယာများပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားခေါ်ဆိုသောအခါ၎င်းတို့ကိုမိုဘိုင်းအကောင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
စတင်သူများအတွက် iPhone (II) ။ အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်
ငါဒီ post ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုဆက်လက်ကြောင်းကိုသင်တို့သတိရပါ။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသင်လွဲချော်ခဲ့လျှင်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်ကွန်များကိုဖန်တီးရန် Psd ပုံစံဖြင့်ပုံစံဆွဲပါ။
အစပြုသူအတွက် iPhone (၁) အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်။
သင့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်၏လက်၌သင့် iPhone4အသစ်စက်စက်ရှိသည်။ သို့သော်…ယခုအသို့နည်း။ ရိုးရှင်း, ယခု ...
AirMusic analysis - သင်၏တေးဂီတကို PS3, XBOX360 သို့မဟုတ် DLNA နှင့်အတူမည်သည့်စက်နှင့်မဆိုကြိုးမဲ့ဖြင့်မျှဝေပါ
နိဒါန်းသင့်တွင် PS3 သို့မဟုတ် XBOX 360 ရှိပါသလား။ သင်ကစားနေစဉ်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုနားထောင်လိုပါသလား။ သင်အသုံးပြုချင်ပါသလား ...
PhotoSync ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြိုးမဲ့ဖြင့်အခြား iOS စက်သို့သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းပါ
PhotoSync သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPad တွင်ရှိသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြိုးမဲ့ဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးသည့် universal application တစ်ခုဖြစ်သည်။
iOS 4.2.1 ကို jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သည်
iPhone 2G (iPod Touch 1G) ၁။ iOS ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအားလုံးပေါင်းထည့်ထားသော Whited1r firmware ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်ခန်းစာ: iBooks + Jailbreak ပြFixနာကိုဖြေရှင်းပါ
အကယ်၍ သင်၏ Device ကို jailbreak ပြုလုပ်ပြီးပါက iBooks ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားတိုင်း ...
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် Cydia applications များ။
ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလယ်တွင် Gnzl ကသူသည် AppInfo အကြောင်းသူပြောသော post ကိုပြသခဲ့သည်။
App Store ရှိထိုရက်သတ္တပတ်၏ App: Algebra Touch
နိဒါန်း: App Store တွင်ယခုသီတင်းပတ်၏ application သည် iPhone, iPod နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Algebra Touch ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - Sn4.2.1wbreeze0(Windows) ဖြင့် untethered jailbreak ပါသော custom firmware 2.2 တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ Custom firmware 4.2.1 ကို jailbreak နှင့် Windows မှ untethered လုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသော: iPhone 3G ...
သင်ခန်းစာ - သင့် iPhone 3GS ကို baseband 6.15 (iPad) (သို့မဟုတ်အခြား) နှင့် iOS 4.2.1 နှင့် jailbreak သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။
သင်၏ iPhone 3GS တွင်အိုင်ပက်၏ baseband ကိုတပ်ဆင်ထားသူအားလုံးသည်၎င်းကိုလွှတ်ပေးရန်အတွက်သင်၌အခက်အခဲအချို့ရှိသည်။
သင်ခန်းစာ - သင့် iPhone4ကို iOS 4.2.1 သို့ Updateband လုပ်ရန် Baseband ကိုမတင်ဘဲ update လုပ်ပါ
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူသင့် iPhone4ကို iOS 4.2.1 သို့ baseband upload မလုပ်ပဲ၊ နောက်ပိုင်း Ultrasn0w ကို install လုပ်ရန် ...
သင်ခန်းစာ - Windows တွင် Greenpois4.2.1n ဖြင့် iOS0ကို jailbreak မည်သို့ untethered လုပ်မည်နည်း
iOS0untethered jailbreak အတွက် iOS5အတွက် Windows Greenposi4.2.1n RC0 ကိုဤနေရာတွင် download ရယူနိုင်သည်။
သင့်မှာသံကြိုးချည်နှောင်ထားခြင်းခံရသည်လား အဲဒါကို untethered စေရန်ဤခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ
Redsn0w နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် jailbreak ရှိပြီးသားဖြစ်ပါလျှင်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ Greenpois0n ကို download လုပ်ပါ။ သင့် iPhone ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အဲဒါကိုပိတ်လိုက်။ ဖွင့်လှစ်သည် ...
Tutorial: Greenpois4.2.1n နှင့်အတူ iOS0untethered jailbreak
ဒီ tool နဲ့အတူ iOS 4.2.1 ကို iPhone 3GS or iPhone4သို့ untethered jailbreak လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ပြန်လည်သုံးသပ်: "Sentinel 3: Homeworld"
နိဒါန်း: မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းများသည်ကျွန်ုပ် iPhone ထဲ၌အများဆုံးပျော်မွေ့လိုသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - SHSH ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာတွေလဲ
အဘယ်ကြောင့် SHSH ပေါ်လာသနည်း Apple က jailbreak ကိုငြီးငွေ့နေပြီး iPhone 3GS (bootrom အသစ်) အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
သင်၏ Apple အကောင့်အချက်အလက်။ သင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လို။
လူအများမေးသည့်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Apple အကောင့်၏ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင် ...
သင်ခန်းစာ - iOS 4.2.1 Redetn0w 0.9.7b5 နှင့်အတူ untethered jailbreak
၎င်းသည် iPhone 4၊ iPad နှင့် iPod Touch 4G အတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်။ iPhone 3G နှင့် 3GS သည် bootrom ပါသော ...
သင်ခန်းစာ။ iPhone 06.15.00G မှာ Baseband 05.13 က 3.xx အထိ Downgrade
Actualidad iPhone တွင်ဘုရင် ၃ ပါးသည်မင်း၌ iPhone 3G ရှိလျှင်မင်းကိုလက်ဆောင်ပေးသည်။
ထာဝရအမွေအနှစ် Gameloft မှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အသစ်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Gameloft ၏ "ထာဝရအမွေအနှစ်" ဂိမ်းသစ်သည်ဂျပန်နိုင်ငံမှဖန်တီးထားသောအခန်းကဏ္ playing မှကစားသောဂိမ်းများ (RPG) ၏အမွေဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - iPad စာရွက်စာတမ်းများကို iPad မှတိုက်ရိုက်ဖန်တီးပါ
iPad အတွက်ရရှိနိုင်သောအပလီကေးရှင်းတော်တော်များများသည် PDF ဖိုင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အထောက်အပံ့ရှိပြီးဖြစ်သည်။
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - Baseband 6.15 ဖြင့်စိတ်ကြိုက် Firmware ကိုပြန်ယူပါ။ SAM (iPhone 3G) ဖြင့်ဖွင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူ Pedro ကကျွန်ုပ်တို့အားသင့် iPhone ကိုမည်သို့ပြန်လည်ထူထောင်မည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းမြင်နိုင်မည့်ဗီဒီယိုနှစ်စုံကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာ - Jailbreak မလိုအပ်ဘဲ Dailymotion၊ Flickr Video, Megavideo နှင့် Vimeo ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုပါ
iOS FlashVideo ဟုခေါ်သော iOS အတွက်ကိရိယာသစ်တစ်ခုအားအသုံးပြုသူကို Dailymotion, Flickr Video, ... ကဲ့သို့သောစာမျက်နှာများမှ flash ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုတွန်းအားပေးရန်နှင့် iPhone ကိုဖွင့်ရန်နည်းလမ်းသစ်
Sbingner ဟက်ကာသည်သင်၏ iPhone ကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းသစ်ဖြင့် Cydia အတွက် application တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ Gameloft ကကျင်းပတဲ့မီဒီယာအတွက်သီးသန့်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကိုကျွန်တော်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။
Ultrasn0w 1.2 နှင့် baseband 6.15 နှင့်အတူဘက်ထရီနှင့်အပူလွန်ကဲမှုပြtoနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
iOS0(သို့) iOS 1.2 ရှိ baseband 6.15 ပါသော ultrasn4.2.1w 4.1 အသစ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် iPhone အတွက် SOS Helpers ဖြစ်သည်
iPhone, Review နှင့် PROMO CODES အတွက် Money Scan x2 (Money Detector)
iOS WStudio အတွက်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီသည် App ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခဲ့သည်။
လွှတ်တင်ရန် iOS 4.1 မှ 6.15.00 သို့ baseband ကိုလည်း upload လုပ်နိုင်သည်
လူအများအပြားက iOS 4.1 အစား iOS 4.2.1 ကိုသုံးပြီးဒီမနက်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာနေကြတယ်။
NOVA2သီးသန့်စမ်းသပ်မှု၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့, Gameloft ထံမှဖိတ်ကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်, ငါတို့လာမယ့် NOVA2၏ Beta version ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြသည် ...
iOS3အတွက် Ultrasn3w ဖြင့် iPhone 0G / 4.2.1GS ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင်ခန်းစာ
သတိပြုရန်: iPhone ကိုအသစ်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အံဆွဲထဲရှိသူများအတွက်ဤသင်ခန်းစာကိုသာကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
The Oval Theme2(iPhone / iPod နှင့် iPad)
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၎င်းသည် izzFizz HD ¨အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးယနေ့တွင် O The Oval Theme 2¨ဘဲဥပုံ Theme2သည်…
iTunes 10 တွင်အယ်လ်ဘမ်အနုပညာကိုသင်၏တေးသီချင်းထဲသို့အလိုအလျောက်ထည့်ပါ
iArtwork 1.4 ဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတအဖုံးများကိုတစ် ဦး မှတစ်ခုသို့ရှာရန်ဖြစ်သောပြisနာကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏ Find my iPhone အကောင့်အတွက်အတည်ပြုအီးမေးလ်ကိုသင်မရရှိပါသလား။ ဒါကိုစမ်းကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ MobileMe အကောင့်ကိုပြုပြင်ရန်သွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ iPhone ရှာဖွေခြင်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်သည်အလားတူပြproblemနာနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
Redsn4.2w 0b0.9.6 နှင့်အတူ iOS4jailbreak
Dev-Team သည် Redsn0w ကို ၀ င်းဒိုးနှင့် MAC မှ iOS 0.9.6 jailbreak ဗားရှင်း 4b4.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်:…
အကြောင်းအရာ: Fizz HD v1.7 + Fizz HD SBSettings
ပထမ ဦး စွာဤအကြောင်းအရာသည် iPhone4နှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းကို iPhone 3G သို့မဟုတ်…တွင်တပ်ဆင်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
Tutorial: SSH စကားဝှက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
သင်သိသည့်အတိုင်းအက်ပဲလ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် "SSH" မှဝင်ရောက်ရန်တူညီသောစကားဝှက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကိုသင်ပုံမှန်အသုံးပြုပါက ...
tutorial: Sn4.1wbreeze0(Windows) ပါသော jailbreak iOS 2.1
Sn0wbreeze 2.1 ကို Windows အတွက် Pwnage Tool ဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် firmware မှတစ်ဆင့် iOS 4.1 ကို jailbreak ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်ခန်းစာ - Android OS ကို iPhone 2G / 3G ပေါ်မှာကွန်ပျူတာသုံးစရာမလိုပဲထည့်ပါ
iPhoDroid ကို အသုံးပြု၍ Android operating system ကို iPhone EDGE သို့မဟုတ် iPhone 3G တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ယခုအထိ ...
သင်ခန်းစာ: Game Center ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပါ
အကယ်၍ iOS 4.1 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် iPhone ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်ကိုသင်တော်တော်များများသိရှိခဲ့ကြပြီ ...
သင်ခန်းစာ - iPhone 720GS တွင် 3p ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုဖွင့်ပါ
iPhone 3GS အသုံးပြုသော Cortex ARM ပရိုဆက်ဆာသည်ဗွီဒီယိုကို resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်သည့်ပုံရသည်။
သင်ခန်းစာ - baseband ကို upload မလုပ်ပဲ Windows မှ iOS 4.1 ကို jailbreak လုပ်နည်း
Redsn0w အသစ်တွင် iOS 4.1 သို့ baseband မတင်ဘဲ update လုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသည်။
Gameloft ၏စတားတပ်ရင်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုအသစ်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအောင်မြင်သောဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ Gameloft သည်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်လာမည့်အရာကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Easypiso iPhone၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခန်းဖော်များမျှဝေပါ
အက်ပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီ EasyRoommate က၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုအက်ပလီကေးရှင်းသို့ဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
သင်၏ ၉ နှစ်အရွယ် iPod၊ သမိုင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများ၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်တေးဂီတဖွင့်စက်များသည်ကြီးမားပြီးနှေးကွေးသည်၊ သေးငယ်။ အချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ရသည်။
iOS 4.1 ကို PwnageTool ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်သင်ခန်းစာ
Mac အတွက် PwnageTool 4.1 ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ iPhone ကို jailbreak လုပ်ရန်ညွှန်ကြားချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Windows အတွက် Redsn0w 0.9.6b1: iOS 4.1 Jailbreak iPhone 3G
Redsn0w သည် iOS 4.1 Redsn0w 0.9.6b1 ကို jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဘယ် tablet ကသင့်အတွက်သင့်တော်ပါသလဲ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သင်ခန်းစာနှင့်ဗီဒီယိုများ
Redsn0w: iPhone 3G အတွက် jailbreak
Redsn0w ကို iPhone 4.1G နှင့် iPod Touch 3G ရှိ iOS2jailbreak အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။ ဒါ…
Typhophone 4: အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာ
Typophone4သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ဖုန်းများအတွက်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အမှန်တရားမှာအိမ်မျက်နှာပြင်သည်မယှဉ်နိုင်ပါ။ Is ...
Spider-Man ™ - စုစုပေါင်း Mayhem၊ မင်းကအကောင်းဆုံးစူပါဟီးရိုးဖြစ်လာမှာလား။ ပြန်လည်သုံးသပ်
Spider-Man: Total Mayhem, action-packed ရုပ်ပြစာအုပ်သည် Gameloft အားဤခမ်းနားထည်ဝါသောဂိမ်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
iPhone SMS ၏အသံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ
ဒီနေ့သင်ခန်းစာယူလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းနဲ့သင် iPhone မှယူဆောင်လာတဲ့ SMS ရဲ့အသံတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
iTunes 10 ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခြင်း ("applications များ" ကိုနှိပ်သောအခါပိတ်ပါသည်)
သင့် iPhone ၏ application tab ကိုဖွင့်သောအခါ iTunes 10 ပိတ်သွားလျှင်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
သင်၏ Hotmail ကို Push ဖြင့်တပ်ဆင်ပါ
Hotmail သည် Push အကြောင်းကြားစာများနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။ ထိုအချိန်သည် Microsoft အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသူသည်သင်တို့ပြင်ဆင်ရမည်။
အိုင်ပက်ဒ်တွင်မည်သို့ရှာရမည်နည်း - iTunes, Tutorial ဖြင့် UDID, CDN, IMEI နှင့် ICCID
သင်၏ iPad ၏ 3G ကိုဖွင့်ရန်အခက်အခဲများရှိပါကသင်၏ CDN, IMEI နှင့် / သို့မဟုတ် ICCID နံပါတ်တောင်းခံနိုင်သည်။ လား
iPhone4(Springboard) အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောခေါင်းစဉ်များ
ispazio မှသင့် iPhone4ဖန်သားပြင်အတွက် resolution မြင့်သောအကြောင်းအရာအချို့ကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။ ဤတွင်အချို့သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။
iPhone အသုံးပြုသူအသစ်လား။ ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ
ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖုန်းအသစ်အတွက်နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်များ။ New iPhone အသုံးပြုသူကဏ္ see ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ နှိပ်နေသည် ...
iPhone အသုံးပြုသူအသစ်လား။ မင်းသိသင့်တဲ့လှည့်ကွက် (၁)
ယမန်နေ့ကကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Nacho နှင့်မှတ်ချက်ပေးရာတွင် iPhone4သည်အသုံးပြုသူများစွာကို iPhone လောကသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
iPhone4အတွက်ကောင်းမွန်သောသုံးသပ်ချက်
အင်တာနက်ကိုလေ့လာခြင်း iPhone4နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုတွေ့ပြီ၊ ၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်။
စပိန်ဘာသာစကား၏ Great Vox အဘိဓါန်
App Store တွင်စပိန်အဘိဓာန်များကိုသင်ရှာဖွေဖူးပါကအဘိဓာန်များစွာသာရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို Vodafone ထံမှရရှိသောအခါ iTunes ကဆက်တင်အသစ်တစ်ခုရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားရှိသင်၏ iPhone ဆက်သွယ်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်လမ်းညွှန်
အီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုရေးရန်အိုင်ကွန်မှထွက်ခွာ။ နောက်ဆုံးသိမ်းဆည်းထားသောမူကြမ်းပေါ်လာသည်ကိုသင်သိပါသလား။ iOS ၏အင်္ဂါရပ်များစွာမှာကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Splinter Cell Conviction III: Analysis
ဆမ်ဖစ်ရှာ၏ကြီးမားသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဂိမ်း၏အခက်အခဲဖြစ်သော Cadet၊ အေးဂျင့်နှင့် Splinter ဆဲလ်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ မှ…
Tutorial: iTunes USA အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ iTunes USA အကောင့်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ applications တွေကို download လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - သင့် iPad ပေါ်တွင်မဂ္ဂဇင်းများ (အပိုင်း ၁)
လှည့်ကွက် - iPhone ကိုပိတ်ထားသည့် YouTube မှအသံ
TomTom III ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: CarKit
Tomtom က GPS signal ကိုတိုးတက်စေရန် iPhone နှင့် iPod Touch အတွက်တရားဝင်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာ - iPhone 3G နှင့် 3GS ကို iOS4မှ 3.1.3 သို့အဆင့်လျှော့ချပါ
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် ၁။ iTunes 1 Windows - Mac9.1 ။ မူရင်း firmware 2: iPhone 3.1.3G - iPhone 3GS3 ။ iRecovery v ၁.၃ Windows - Mac3 …။
မိုဘိုင်းဒေတာကွန်ယက်ကို iOS4တွင်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း (သင် Movistar မဟုတ်လျှင်)
သင့်ဖုန်းကိုတရား ၀ င်အော်ပရေတာဖြင့်အသုံးပြုပါက (movistar စပိန်ဘာသာဖြစ်ပါက) ဒီသင်ခန်းစာကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံ ...
tutorial: RedSn4.0w နှင့်အတူ jailbreak iOS0နောက်ဆုံးဗားရှင်း (iPhone 3G တစ်ခုတည်း)
iOS 4.0 ကိုထုတ်လုပ်ပြီးပါက RedSn0w 9.5 b5 နှင့်အတူ jailbreak သည်နောက်ဆုံး version အတွက်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီသည်။
သင်ခန်းစာ - အပြည့်အဝပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသည့်အခါသင်၏ဂိမ်းတွင်တိုးတက်မှုကိုသိမ်းဆည်းပါ
ယနေ့ Apple သည် iPhone, iPod Touch နှင့် iPad platform များအတွက် operating system အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ စတိဗ်ဂျော့ဘ်စပြောနေတာက ...
ထိပ္ဖ်ား: Safe mode ကိုဖွင့်ပါ (Jailbreak သာ)
သင်ခန်းစာ - သင့်ရဲ့ iPhone Battery ကိုပိုကောင်းအောင်ချိန်ညှိပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် (များသောအားဖြင့်လစဉ်လတိုင်း) ငါတို့ရဲ့လက်ပ်တော့ပ်၏ဘက်ထရီများကိုချိန်ညှိသူအများစုမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုကိုသင်၏ PC / Mac မှအက်ပ်များမပါဘဲသင်၏ iPhone သို့စီးဆင်းပါ
App Store တွင် iPhone သို့မဟုတ် iPod Touch ဖြင့်ဗွီဒီယိုလွှင့်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော် ...
သင်၏မှတ်စုများကို offline ဖြစ်ရန် Evernote ကိုသတ်မှတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Evernote အက်ပလီကေးရှင်းသည်မည်မျှစွဲမှတ်ဖွယ်အသုံးဝင်သည်ကိုသိကြသည်။ သူ့ရဲ့ပရီမီယံဗားရှင်းကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။
သင်ခန်းစာ - iPhone 3.1.3G အတွက် Custom Firmware3(ပြုပြင်ထားသော) နှင့် Jailbreak
၎င်းသည် iPhone 0G တွင် sn1.3wbreeze v3 ပါသော Firmware (စိတ်ကြိုက်) တပ်ဆင်ရန်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ၏ ...
သင်ခန်းစာ - iPhone 3.1.3G အတွက် Custom Firmware2(ပြုပြင်ထားသော) နှင့် Jailbreak
၎င်းသည် iPhone 0G တွင် sn1.3wbreeze v2 ပါသော Firmware (စိတ်ကြိုက်) တပ်ဆင်ရန်သင်ခန်းစာဖြစ်သည်။ ၏ ...
tutorial: Sn3.1.3wbreeze v0 နှင့်အတူ Jailbreak iPhone Firmware 1.3 (Windows)
နောက်ဆုံးအဆင့် - iH8sn0w သည် Sn0wbreeze v1.4 ဗားရှင်းအသစ်ကို Jailbreak firmware 3.1.3 ၏…
သင်ခန်းစာ - redsn3.1.3w0ဖြင့် Jailbreak Firmware 0.9.4
DevTeam သည် redsn0w ကို 0.9.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး Jailbreak ကိုသိရှိရန် Firmware 3.1.3 အသစ်သို့ ...
ထိပ်ဖျား: သင်၏ iPhone စပီကာအတွက်အပိုစွမ်းပါ
ပွင့်လင်းမြင်သာသော icon များကိုဖန်တီးပါ
AppleiPhone.fr သည် iPhone နှင့် iPod Touch များတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသော icon များတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖန်တီးထားသည်။
အခြားအော်ပရေတာတစ်ခုဖြင့် iPhone ကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပါ
အကယ်၍ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအင်တာနက်ဖြန့်ချိပြီးအခြားအော်ပရေတာတစ် ဦး နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါကသင်အနေဖြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဆက်တင်များကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသည့် iPhone ဖြစ်သည့် Steve Jobs လက်ဖြင့်ထိုအသွင်အပြင်ကိုတွေ့ပြီးနှစ်နှစ်ခန့်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။
Terminal မှ SSH စကားဝှက်ကိုပြောင်းပါ
Jailbreak လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် iPhone ရဲ့လုံခြုံမှုအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၏အဓိကပြproblemsနာတစ်ခု ...
လက်စွဲ - Jailbreak၊ Unlock၊ Activation၊ BaseBand, 3GS နှင့်ဆင်းသက်လာသောပြproblemsနာများ
BlackSn0w နှင့် Blackra1n (3G နှင့် 3GS အတွက်ပံ့ပိုးမှု) ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Jailbreak လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲသည်ကွန်ယက်သို့ထွက်သွားပြီဖြစ်သည့် BlackRa1n ဆော့ဝဲလ်အသစ်သည်အသစ်ပြောင်းလဲခြင်း ...
သင်ခန်းစာ: Firmware3နှင့် Saurik မှသိမ်းဆည်းထားသော ECID ဖိုင်ဖြင့် iPhone 3.1Gs သို့အဆင့်လျှော့ချပါ
သင်သိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ iPhone 3Gs များသည်တပ်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုမီ Apple server နှင့်ဆက်သွယ်ရမည်။
iPhone Ultraportable: Finder
လက်တော့ပ်များ၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာစနစ်ဖိုင်များမှတဆင့်သွားလာရန် ၀ င်းဒိုးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
TomTom မှ iphone အဆက်အသွယ်များကိုခေါ်ရန် tutorial
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းသတင်းဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Revelion သည် ၀ င်းဒိုးအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
3.0 မှာချိတ်ဆွဲထားသော app များကိုပိတ်ရန်
၃.၀ မတိုင်မီ firmware များ၌ hang application ကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Home ခလုတ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှ နှိပ်၍ သာကိုင်ထားရသည်။
ဒီဗီဒီယိုမှာ laptop ရဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အနေနဲ့လက်တော့ဘက်ထရီကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
iPhone News စာဖတ်သူအချို့ကသူတို့မှာ Cydia နဲ့ပြthatနာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီအမှားက ...
[သတိပေးချက်] - iPhone ပေါ်ရှိ YouTube HD နှင့် YouTube
မင်းတော်တော်များများက iPhone မှ HD ဗွီဒီယိုများနှင့်အရည်အသွေးကိုမည်သို့ရယူရမှန်းသေချာစွာသိပြီးဖြစ်သည်။
[သတိပေးချက်] ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို Hang သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုပါ
အဘိဓါန် - လေ့လာသူ၏လမ်းညွှန်
လှည့်လည် - novice လက်စွဲ (နှင့်ရှာဖွေသူမဟုတ်)
သင်ခန်းစာ: Ultrasn0w 0.8 - iPhone 3G နှင့် 3Gs ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း
redsn0w 0.8 ကဲ့သို့ Ultrasn0w ကို DevTeam မှမနေ့က version 0.8 သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။ Ultrasn0w ...
tutorial: redsn0w 0.8 - iPhone 2G, 3G, 3Gs, iPod Touch 1G နှင့် 2G အတွက် Jailbreak
DevTeam သည် redsn0w ကို 0.8 သို့မွမ်းမံခဲ့သည်။ redsn0w သည် QuicPwn မှအစားထိုးသည်။
Carlinhos တုံ့ပြန်မှု (၃) - ရှင်းလင်းသောရှာဖွေခြင်းသမိုင်း
ဖြန့်ဝေမှုအသစ်နှင့်မေးခွန်းသစ်၊ သင်ကများစွာသော၊ အထူးသဖြင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်အသုံးဝင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။
GPS iDa: အက်ကွဲ၊ ရေဒါနှင့်မြေပုံများ
iDa သည် Cydia နှင့် iCy တို့တွင်ရနိုင်သော GPS တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းမှာ ၁၀၉၉.၉၉ ဖြစ်၍ ကြီးမားသောပမာဏရှိသည်။
Iwep သည် wifis wlan ကို wep security (တယ်လီဖုန်းများ) ဖြင့်အက်ကြောင်း
ဤပိုစ့်သည် iphone ဖြင့်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသိရုံမျှသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
iLyrics သည်သီချင်းစာသားများကို iTunes တွင်အလိုအလျောက်သိုလှောင်သည်
iLyrics သည်သင်၏သီချင်းစာသားများကိုရှာဖွေရန်၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်သိမ်းဆည်းရန်တာဝန်ရှိသောအစီအစဉ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
iPhone Backup ကို 3.0 နှင့် iTunes 8.1 တွင် encrypt လုပ်ပါ
သင်၏ iPhone (3.0 ဆော့ဝဲလ်နှင့်) ၏ထပ်တူညှိနှိုင်းမှုဆက်တင်များကိုရွေးချယ်သောအခါအနှစ်ချုပ် tab တွင်ရွေးစရာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
iBluetooth App ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
ပြီးခဲ့သည့်ပို့စ်တွင် application ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုပြောပြီးပြီ၊ ယခု application ကို သုံး၍ ကြိုးစားမည်။
SSH မှတဆင့် iBluetooth ကိုအပြည့်အဝ install လုပ်ပါ
ဤလျှောက်လွှာနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောထားသည်မှာအလွန်အသုံးဝင်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
Ubuntu ကိုသုံးသလား။ သင့် iPhone ကို၎င်းနှင့်ထပ်တူပြုပါ
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPod Touch ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် Windows သို့မဟုတ် Mac OS X ကိုအသုံးပြုပါကသင်ကံကောင်းသည်။ အတွင်း…
PhotoShop တွင်သင်ကြိုက်သည့်ပုံနှင့် iPhone အိုင်ကွန်များပြုလုပ်ပါ
iPod / iPhone 3g ကိုဘယ်လို Boot လိုဂိုမှာနေရလဲ
၎င်းကို iPod Touch နှင့် iPhone 3G တို့တွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ iPhone 2G ရှိသူတစ် ဦး ဦး ကကြိုးစားလိုပါကကြိုဆိုလိမ့်မည်။
အိုင်ဖုန်းမှာအတန်း ၅ တန်းတင်လိုက်ပါ
အင်တာနက်ကို ၀ င်ကြည့်ရင်းအိုင်ဖုန်းလိုင်းငါးခုကို iPhone6ထဲကိုထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အလွန်ကြီးစွာသောအသုံးချပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင်ခန်းစာ - ဂူဂဲလ်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်များကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အခမဲ့စည်းညှိခြင်း
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone နှင့်ကြားခံများမပါဘဲအခမဲ့လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုအထိ၊
ဒီနေ့မင်းတို့ရဲ့ iPhone ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုပေးပြီ။ ဒါဟာ ... ထဲမှာပေါ်လာသောစာသားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းပါ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီအတွက်မကြာသေးမီကတင်ပြခဲ့သည့် mod နှင့်အတူလိုပါကရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူ ...
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းမြည်သံကို iTunes ဖြင့်ဖန်တီးပါ
iPhone အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသံများကိုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
QuickPwn ကို အသုံးပြု၍ Firmware2ဖြင့် Jailbreak iphone 2.2G ကို Unlock နှင့် Jailbreak လုပ်ပါ
ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘလော့ဂ်ထဲမှာ saimox ကကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်ပြီးပါပြီ။ ငါအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ။
မင်းရဲ့ iphone ပေါ်မှာ emoticons တွေထည့်ထားပါ
ကောင်းပြီကောင်းပြီကြည့်ကြရအောင်။ Apple မပါဘဲ iPhone မွာ iPhone အတွက်ဂျပန်အတွက်သာထုတ်ပေးသောစမတ်ဖုန်းများမည်သို့ရနိုင်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
မေးလ်ဖြင့် iPhone ကိုနေရာမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
iPhone ၏ပထမမျိုးဆက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်4နှင့် 8 gigabytes နှင့်လက်ရှိ 8 နှင့်ရှစ်ခုတွင်ရရှိနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ iPhone Ringtones တွေကိုဖန်တီးရတာသိပ်မလွယ်ကူဘူး
Audiko ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (iPhone News မှာဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရင်ရေးသားထားပြီးဖြစ်သော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေများ ... )
Mocha VNC ဖွဲ့စည်းမှုလမ်းညွှန်
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကို ActualidadIphone မှာသူ့ရဲ့နေ့ကတင်ပြပြီးဖြစ်ပေမယ့်ဒီအလွန့်အလွန်အသုံး ၀ င်တဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်၏အချက်အလက်များ၊ သူတို့အတွက်…
သင်အကြိုက်ဆုံးရေဒီယိုလိုင်းများကို iPhone သို့« Tuner »ထည့်သွင်းနည်း
မဟုတ်ပါ။ iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးရေဒီယို app သည် "ShoutCast" မဟုတ်သကဲ့သို့ "Allradio" လည်းမဟုတ်ပါ။ ယခုအဘယ်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့သင်နားလည်ပါလိမ့်မယ် ...
www.ibrico.es စာမျက်နှာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤစာအုပ်ငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ရရှိသော်လည်းသိပြီးသားများစွာသော ...
ဒီသင်ခန်းစာမှာ iTunes ကဒါကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ Audiobook တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။ ဖြစ်စဉ် ...
၁။ ကျွန်တော်တို့မှာ winterboard ကို install လုပ်ရမယ်၊ Cydia ကလုပ်နိုင်တယ်။ ၂ ။ ၃ ။
သင်ခန်းစာ - Cyberduck ဖြင့် SSH မှတဆင့် iPhone နှင့် iPod Touch ကိုရယူပါ
ယခုသင်ခန်းစာတွင် SSH မှ iPhone နှင့် iPod Touch ကိုပရိုဂရမ်နှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုရှင်းပြပါမည်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ iPhone keyboard ကိုလိုချင်ရင် cap lock ဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိပေးခဲ့တယ်။
Actualidad iPhone တုံ့ပြန်မှု (အပိုင်း ၁) ။
သင်ခန်းစာ - iPhone ပေါ်မှာစက္ကန့် ၃၀ ကျော်ဖုန်းမြည်သံများ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကြာရှည်ခံမည့် iPhone တန်ချိန်များသာမကစိတ်ဆင်းရဲစရာများကိုသာခံစားချင်ပါသည်။
(Anti) iPhone / iPod ကိုရိုက်ပါ
iPhone Spanish မှသူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကောင်းကိုရတယ်။ ဒါမှငါတို့ရဲ့ iPhone မှာဒေတာလုံလုံခြုံခြုံရမယ်။
ဗားရှင်း2နှင့်အတူ Jailbreak နှင့် Unlock iPhone 2.1G မှသင်ခန်းစာ
ယခုသင်ခန်းစာတွင် Jailbreak ပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုရန်အတွက်ဗားရှင်း ၂.၁ သို့ upload တင်ရန်၊ သိုမဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်သင်ယူရန် ...
ဗားရှင်း3နှင့် Jailbreak iPhone 2.1G ကိုမှသင်ခန်းစာ
ယခုသင်ခန်းစာတွင် Jailbreak လုပ်ပြီးသည်နှင့်ဗားရှင်း ၂.၁ သို့တင်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်ယူရမည်။ မရသေး…
google အုပ်စုများမှ iphone Spanish မှသင်ခန်းစာယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ထုတ်ဝေခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်းရဲ့ iphone ကိုအင်တာနက်ကို wifi မပါပဲချိတ်ဆက်ပါ
Foroiphone.com ရှိကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသင်ခန်းစာသည် iPhone မပါဘဲအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်။
Dock မှာအက်ပလီကေးရှင်း ၅ ခုထည့်နည်း
Dock, ကျွန်တော်သိနှင့်ပြီးသား, မီးခိုးရောင်နောက်ခံနှင့်အတူ iPhone ၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ...
Installer / Cydia အသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းကိုသင့်အားကြာမြင့်စွာမပြောသေးပါ၊
iPhone ရှိအခြားအရာများဖြစ်သောအခြားမိုဘိုင်းနှင့်ကြိုးဖုန်းများကဲ့သို့သောစွမ်းရည်သည် ... \_ t
WinPwn 2.0.0.4 ဤနေရာတွင် !!!!! (တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်)
iPod Touch နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ iPhone 2G ကိုတက်ကြွစွာဖြန့်ချိနိုင်ပြီး iPhone 3G ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဘာလဲ…
သင်ကပထမမျိုးဆက်အိုင်ဖုန်းပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသင့်မှာအမြင် - အသံ - မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုမရှိပါကသင့်ကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ပါ ...
EDGE / 3G (Firm2.0) ကိုပိတ်ပါ
firmware အသစ်တွင်အချို့သောအခြေအနေများတွင် EDGE သို့မဟုတ် 3G သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုမှုမပါဘဲသက်ဝင်လိမ့်မည်။
၂။ MobileMe အတွက်ကွန်ပျူတာကိုပြုပြင်ပါ
MobileMe ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ဒုတိယသင်ခန်းစာနှင့်အတူ iPhone data များကို ...
iPhone 3G အသစ်၏အကြီးမားဆုံးဆိုးကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ဒီဟာကအနည်းငယ်မျှသာ
၁။ MobileMe တွင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
ဒီဟာက MobileMe ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာပထမသင်ခန်းစာပါ။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် MobileMe အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပုံကိုလေ့လာပါမည်။
ကုမ္ပဏီနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် iPhone 3G အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Voice Mail ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဗားရှင်း 2.0 မှ 1.1.4 (Windows) သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
အကယ်၍ သင်ဟာ iPhone ကို iTunes ဖြင့်မှားယွင်းစွာအဆင့်မြှင့်ခဲ့လျှင်ရရှိနိုင်ပါမူဗားရှင်း ၂.၀ အသစ်သို့သင်၌ iPhone ရှိလိမ့်မည်။
Video Ringtones ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
သူတို့ကငါတို့ကိုခေါ်သည့်အခါတိုင်းပုံသေ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်လုပ်သောပုံတစ်ပုံပေါ်လာသည်။ ကောင်းပြီ…
စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ (SMS) အတွက်သံစဉ်များဖန်တီးရန်လက်စွဲ
ပထမဆုံးသိသင့်တာကတော့ iPhone က text message tones အတွက်ထောက်ပံ့ပေးသော format ဖြစ်သည်။
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် iPhone တစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်ပါ
ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်သည့် အချိန်မှစ၍ လုံးဝဖျက်သိမ်းသည်အထိ iPhone သည်အဘယ်နည်း။ ဓာတ်ပုံအားလုံးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ...
အကယ်စင်စစ်သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအချိန်တွင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး ထံ SMS ပို့လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သိသည်။
လက်ဗွေဖတ်စက်ကို iphone lock screen တွင်မည်သို့ထားရမည်နည်း
ကောင်းပြီဒီမှာလက်ဗွေဖတ်တဲ့သူဘယ်လို iphone ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာသင်ဖို့ကောင်းကောင်းသင်ပေးတယ်။
အကယ်၍ သင်၏ iPhone စတိုင်၏ကီးဘုတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုပါကဤသင်ခန်းစာအတိုင်းလိုက်နာပါ။
Force restart လုပ်ခြင်း iPhone / iPod (force restore)
FileBrowser application အသစ်
Stephan Bayer မှဖန်တီးသည်။ ဤ file explorer သည်သင်ဖြတ်နိုင်၊ ကူးယူခြင်း၊ ကူးထည့်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ သုံးနိုင်သော mobilefinder အဟောင်းများထက်သာလွန်သည်။
iPhone Dictionary Checker ကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ
သင်သတိထားမိခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် iPhone သည်ထိုစကားလုံးများကိုတည့်မတ်ပေးသောအဘိဓာန်တစ်ခုပါရှိသည်။
ဒီပရိုဂရမ်က iPhone ကိုသက်ဝင်စေဖို့နဲ့သော့ဖွင့်ဖို့အတွက် Jailbreak အတွက်အကြံပြုထားတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ၎င်းကိုသင်ပြုပြင်နိုင်သည်
firmware ကို manually Download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ
ဒီသင်ခန်းစာ mini နဲ့အတူ iTunes ကနေကိုယ်တိုင် install လုပ်ဖို့တရားဝင် iPhone firmware တွေကိုဘယ်မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်သိမှာပါ။ အသုံးဝင်သောလုပ်ငန်းစဉ် ...
ဂန္ထဝင်များကြားတွင်ဂန္တ ၀ င်ဂန္တ ၀ င်ဂန္တ ၀ င်တစ် ဦး သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရင်ပြင်များ ခွဲ၍ ၎င်းကိုမူလအနေအထားသို့ပြန်ရောက်သည်အထိရွှေ့ပါ။
iPhone မှတ်စုများကိုအရန်ကူးနည်း (Mac)
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့မှတ်စုများကို Mac မှ iPhone ထဲသို့ဘယ်လို download ချရမယ်၊ ဘယ်လို upload လုပ်မယ်ဆိုတာလေ့လာပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုပိုမိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အဆင့်သစ်တစ်ခု။ ဖုန်းကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာအိုင်ဖုန်းကပုံမှန်အားဖြင့်မပံ့ပိုးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် ... နံပါတ်တွေ ... ပြtheနာရှိနေမှာပါ။
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ ၁.၁.၃ နှင့်အထက်ရှိသော iPhone သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ၂၅၀ အထိသမိုင်းကိုမည်သို့တိုးမြှင့်ရမည်ကိုလေ့လာမည်။ ထွက်လာလိမ့်မယ်
ဖိုင်များကို iPhone ဖြင့်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ Safari ကိုအသုံးပြုပြီး iPhone 1.1.4 မှဖိုင်များကိုဘယ်လို download လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
iPhone ကို linux သုံး၍ ထပ်တူပြုပါ
adslzone မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီသင်ခန်းစာကသင့်ကို iPhone (Amail) နှင့် (jailbroken ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်) ကို synchronize လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
- စပိနျအဘိဓါန်, Glosbe
မည်သို့ရယူရမည်နည်း - ၁) Installer မှ weDicter Installer ၂) အဘိဓာန်များကိုထည့်သွင်းပါ။ ဒီအဘို့ငါတို့တူညီတဲ့ installer ကိုအတွက် ... ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ iPhone မှာ Wikipedia ကိုအော့ဖ်လိုင်း။
ဒီနေရာမှာအိုင်ဖုန်းအော့ဖ်လိုင်း (ဝီကီပီးဒီးယားကိုလျော့နည်းသွားစေဖို့ပုံများမပါဘဲ) ရှိဖို့ဝီကီပီးဒီးယားရှိဖို့သင်ခန်းစာကောင်းတစ်ခုယူလာပါ။ ပထမ ...
ဒီနေ့မှာ AA ဘက်ထရီ ၄ ခုပါတဲ့ portable charger တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာဒီနေ့သင်ပေးတယ်။ ဂရုတစိုက်လုပ်ပါ ...
သီချင်းစာသားတွေကိုသီချင်းတွေကိုထည့်ပြီးအိုင်ဖုန်း ၁.၁.၃.၁ ၁.၁.1.1.3 တခုထဲကိုသာမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
ငါဒီအတွက်အသုံးပြုတဲ့ပရိုဂရမ်က lyricsnapper ဖြစ်တယ်၊ သင်က iTunes နဲ့အတူဖတ်မယ်။ သီချင်းတွေကြားတဲ့အခါမှာ။
ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်းခေါ်ဆိုသောအခါသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်း Active ကိုဖယ်ရှားပါ
ဒီသင်ခန်းစာကို dev-team ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ထားသော iphone 1.1.4 အတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်…
ပြနာများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ Firmware 1.1.4 iPhone (အသစ်ပြုပြင်မည်)
ပြProbleနာ - ကျွန်ုပ်တို့မှာအဆက်အသွယ်တွေရှိပေမဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေရောက်လာတဲ့အခါနံပါတ်နဲ့နာမည်မပေါ်လာဘူး။ ဖြေရှင်းချက်။ ။ AppSupport ကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပါတယ်။
iPhone / iPod Touch ပေါ်မှာ Nintendo Play ဖို့ Roms ကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲ
Mario Bros. , Castlevania, Contra, Zelda စသည့်ဂန္ထဝင်ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သူများစောင့်ဆိုင်းနေရသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ ငါတို့သွားသည် ...
Mac မှ iPhone / iPod Touch ဖိုင်စနစ်ကိုသုံးပါ
ကွန်ပြူတာမှအိုင်ဖုန်းဖိုင်စနစ်ကိုဘယ်လိုရယူရမယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိပြီးသားပါ။ အခုဆိုရင် ...
iPhone / iPod Touch ဖိုင်စနစ်ကို data cable မှတစ်ဆင့်ရယူပါ
SSH မှတစ်ဆင့် iPhone / iPod Touch ဖိုင်များကိုမည်သို့ရယူရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသင်၏ရယူရန်နည်းလမ်းများလည်းရှိသည်။
ကိရိယာမှပရိုဂရမ်များကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန် Installer ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပြီးပါပြီ။ သို့သော်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
SSH မှတစ်ဆင့် iPhone / iPod Touch ဖိုင်များကိုရယူပါ
iPhone ကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပြီး PC သို့ Mac သို့ချိတ်ဆက်သောအခါမိမိကိုယ်ကိုမေးပါက၎င်းကိုဘာလို့မသုံးနိုင်တာလဲ ...
ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်နှင့် app / iPhone / iPod Touch ကိုသာတပ်ဆင်လိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့မသိတာက ...
ကောင်းပြီ၊ ZiPhone ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခြင်းအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်၊